देउवालाई प्रकाशमानको चुनौती, संसदीय दलको नेता को ? – Online National Network
देउवालाई प्रकाशमानको चुनौती, संसदीय दलको नेता को ?
१२ फाल्गुन २०७४, शनिबार ११:२९
दलको नेता पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। देउवा निकट एक नेताका अनुसार सभापति आफै संसदीय दलको नेतामा उठ्ने तयारीमा छन्। ‘अरु कुनै दोस्रो व्यक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेको नदेख्दा सभापति आफै उम्मेदवार हुने देखिन्छ,’ उनले भने।
प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २३ र समानुपातिक ४० गरी कांग्रेसको संसदीय दलमा ६३ सदस्य छन्। देउवा निकटस्थ नेताका अनुसार संसदीय दलमा देउवाको पक्षमा कम्तीमा ३७ भोट पाउने देखिन्छ। त्यसैले सुविधाजनक बहुमत हुने अवस्था भएकाले देउवा आफै दलको नेतामा अगाडि बढ्ने तयारीमा छन्।
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद हार बेहोरेपछि पार्टीभित्र सभापति देउवाको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। विधान र पद्धतिविपरीत पार्टी सञ्चालन हुँदा कांग्रेस इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको बताउँदै देउवाका विपक्षीले पार्टी नेतृत्व छाड्न दबाब बढाइरहेका छन्।
नेता प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेतामा आफू उम्मेदवार हुने प्रष्ट पारिसकेका छन्। सभापति देउवालाई कुनै पनि हालतमा सर्वसम्मत बन्न नदिने बताउँदै नेता सिंह जति भोट ल्याए पनि आफू पछि नहट्ने अडानमा छन्।
नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत दलको निर्वाचनमा सिंहलाई आगाडि सार्ने योजना बनाएको छ।
महामन्त्री शशांक कोइरालाले सर्वसम्मत हुने अवस्थामा मात्र दलको नेता बन्ने भन्दै निर्वाचन नलड्ने बताइसकेका छन्। संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा २९ भोट रहेको नेता पौडेल निकट स्रोतले बताएको छ।